Amakhambi kuleli zwe - ngokudingeka ezibalulekile
Umuntu namuhla, eqhuba emzini kunazo zonke ekuphileni kwami, kudingeka uthintane nemvelo. Evuselela amandla okubekezela bakwazi izitshalo zokwelapha. Ngakho-ke, amakhambi kuleli zwe - akusiyo ezingavamile, kodwa ngempela.
Abalimi Abaningi baqala ukwakha ephulukisa emakhoneni impilo. Phela, aphuza itiye elimnandi, yakhiwa amakhambi, mathupha esekhulile nice kangaka futhi eziwusizo. Amakhambi ezweni ukusiza nge ukulimala ahlukahlukene, nemivimbo, ukusha kanye imihuzuko.
Elimnandi flower embhedeni kuyinto efiselekayo ukubeka eduze ekhishini, bese imifino kuyohlale esandleni. Izidlo kuphekwe amakhambi, etholwe yasekuqaleni futhi okumnandi.
Okwamanje, ukukhethwa imbewu, futhi izithombo, omkhulu. Khetha labo izitshalo for engadini, okuyinto oyithandayo. On ikhule elimnandi flower embhedeni :. parsley, basil, cilantro, dill, marjoram, Tarragon, elungisiwe, rosemary, njll Kuyinto imifino okubabayo hhayi kuphela, kodwa ukulinda inqolobane izakhamzimba. Beyond the amakhambi evamile kungenziwa itshalwe nezitshalo okwelapha izimbali ezinhle uyokhanga izimvemvane. Ngokwesibonelo, e-lavender, catnip, lemon namafutha, Monarda, oregano nabanye.
Mhlawumbe kufanele sinake Thyme, eyaziwa nangokuthi Thyme. Ngokushesha yandisa, ukwakha amacansi obukhulu, ngokuphelele embozwe pink lokuyibubende nemiqumbe futhi zokuhlobisa zonke isizini. Isithakazelo sage, rue, heather, nehisopi, lovage.
Growing amakhambi kulula. Qaphela ukuthi iningi labo abokuzalwa iMedithera, kahle bayokhula kuphela ilanga okugcwele, uvikelekile ezintweni okuvezwayo emimoyeni ebandayo. Kuze kube yimanje, azungezwe imibhede zingahlelwa obukhulu uthango. Nge ungenza okufanayo sibhekane lavender, alpine Aster, santolina, Barberry yemifino, ibhokisi okulula yokugunda.
amakhambi amaningi elimnandi kukhona Ezikhula iminyaka eminingi, ngakho ngibatshale, udinga ukushiya ibanga elincane ukuba ukwanda kwezindawo. Futhi ezinye izitshalo ayadingeka ukuze kukhawulwe ensimini yebandla noma umhlaba izigubhu ahlukene, ngakho zikhula ngokushesha, isibonelo, Mint lemon namafutha.
Amakhambi kuleli zwe like ezomile inhlabathi calcareous. Waterlogging nobumba esindayo nenhlabathi ngabo eyinhlekelele. Uma isayithi yakho izimo ezinjalo, isivuno lingavuswa zezimbali, okuzokwenza ukugcizelela ukuba silandele isitayela esithile futhi lula ukunakekelwa. Amakhambi kuleli zwe kungenziwa itshalwe izimbiza namavazi, anikeza ikhubalo ekhethekile kusayithi lakho.
Uma izwe has a okugeza, kungcono isitshalo Mint, zikagamthilini, wort iSt John sika, umama-futhi-nosingamama. Broths kusuka la makhambi elichithwe amatshe ashisayo, bakhuthaza ukuphulukiswa izifo eziningi ngenxa umphumela ephefumula umusi, ayegcwele amakhambi ethereal izinto.
Umumo imibhede - okuyisici esibalulekile landscape design. izinguqulo Classic: umbuthano ihlukaniswe izingxenye, noma isikwele ne "chessboard". Centre Ukwakheka kungenzeka isihlahla rose noma into ebaziwe. Ngomqondo onabile, inkulumo imibhede kungaba noma iyiphi ukuma - elingunxantathu, unxande, uhambahamba. amakhambi lesidze kuleli zwe ezibekwe inqola noma isondo lokhuni. Indiza ka fancy akanamkhawulo. Zonke kokufika efiselekayo amatshe zamulchirovat noma amagxolo.
Yakha yakho engadini imbali elimnandi embhedeni, izonikeza imifino umndeni wakho for izitsha ezahlukene, isiphuzo itiye, ukuphulukisa, umphefumulo fly, ngokuletha ngobunye nangokuthula.
Ikhukhamba Kibria: incazelo, izithombe, izibuyekezo
Immortelle. Imbali, kanjalo uzuze phakade
Tsiperus Tropical: ukunakekelwa ekhaya
Indlela yokutshala Lilac: imithetho eyisisekelo
Izihlahla apula izihlahla
Ngiyaqonda iphupho ukuthi uyaphupha zokugeza?
UAZ SIMBIR - wangempela wonke amasondo imoto!
Behhashi - iqiniso noma izinganekwane?
Zingaki imiyalo yeholide egcinwe? Isitoreji semibhalo yabasebenzi
Amatshe atholakala enyongweni: izimpawu futhi izindlela ezisebenzayo yokwelashwa
Lost futhi kungafanele ukhohlwe. kufanekisa Slavic
Inani labantu base-Afrika
Lecho. Calorie izitsha
Sansevieriya: izinhlobo, incazelo, izithombe. "Pike umsila", "ulimi Teschin"